I-TreeTops SUITE Joondalup*Uxolo oluzolileyo oluzolileyo*
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguGail
I-SUITE yindawo yonke ephezulu, indlu ejongene nePaki yeSizwe. Ibandakanya igumbi lokulala elikhulu, i-ensuite / igumbi lokuhlambela elibandakanya ibhafu. Igumbi lokuhlala kunye ne-balcony yangasese. Igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela kunye nokwenza ikofu edibeneyo kunye nezixhobo zokwenza iti zibandakanyiwe. Iindwendwe zinofikelelo lwazo ngokutshixa izitshixo kumnyango wangaphambili. Indawo ngokungqongqo AKUKHO UKUTSHAYA. Kukho iWiFi kunye neNetflix efumanekayo ukuba iindwendwe ziyisebenzise kwithebhulethi yazo. Inja kunye nam sinendawo yabucala eyahlukileyo kumgangatho osezantsi.
Igumbi lokulala elikhulu kunye ne-ensuite ebekwe phezulu. Ngokufikelela kwibalcony eneembono ngaphezulu kwePaki yeSizwe. Igumbi lokuhlambela elinebhafu, ishawa kunye nesitya sesandla kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Izinto zangasese zinikezelwa (ukuhlamba umzimba, ishampu kunye ne-conditioner).
Indawo yabucala kunye nokufikelela ngokutshixa isitshixo kumnyango wangaphambili. Indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato iyafumaneka kunye nemvume yokupaka (idiphozithi ye-20.00 yeedola)
Igumbi lokuhlala elahlukileyo elinendawo yokutyela kunye nendawo yokwenza ikofu edibeneyo kunye nokufikelela kwi-balcony zonke zikumgangatho omnye osetyenziselwa wena.
Izibonelelo zokwenza ikofu kunye neti zibandakanyiwe.
IJoondalup inoluhlu olukhulu lweendawo zokutyela ezifumanekayo ekutyeni.
Ipropathi yonke ngokungqongqo AKUKHO UKUTSHAYA.
Ikhitshi kunye nempahla kunye neendawo zam zokuhlala zibucala kwaye azifumaneki kwiindwendwe.
Kumgama wokuhamba ukuya e-ECU, kwisibhedlele saseJoondalup kunye neNdawo yeMfundo.
Indawo yokuhlala ibekwe kakuhle entliziyweni yeJoondalup, imizuzu engama-25 kumantla ePerth City. Nokuba uhamba ngomsebenzi okanye ukuzonwabisa, uya kukuxabisa ukuba nolwandle, indawo yokuthenga ekumgangatho wehlabathi kunye nezithuthi zikawonke-wonke emnyango wakho. Indawo yethu ephambili yenza kube lula ukufikelela kwezona ndawo zinomtsalane ukuze uhlale phantsi, uphumle kwaye wonwabele iholide yakho. Indawo yokuhlala iphakathi kweekhefi, iindawo zokutyela, iibhari ezidlamkileyo, ipaki yesizwe, iindawo zemidlalo, iinkundla zegalufa, iibhanyabhanya, amabala okudlala abantwana kunye neemarike.
IsiXeko saseJoondalup likhaya kuthotho lwezinto ezimnandi nezinomtsalane zasekhaya ezibotshelelwe ukwenza ukuhlala kwakho kwindawo yethu kube yinto ekhunjulwayo. Ezinye izinto ezinomtsalane ziquka iMullaloo Beach, Burns Beach kunye neOcean Reef, ezikumgama nje wemizuzu eli-10. I-Hillary's Marina ithandwa kakhulu ngabatyeleli kunye nabemi ngokufanayo kwaye yimizuzu eyi-15 kuphela. Zininzi iindawo zokutyela kunye neekhefi, iiklabhu zasebusuku, iithaveni kunye neevenkile ezithengisayo. Isikhephe esiya eRottness Island sihamba yonke imihla, kwaye kukho iiseyile eziqeshiweyo kunye nohambo lokuloba ukuze uthathe ithuba lokuhamba usuku. Kufuneka uyibone eyona poplar 'AQWA', indawo enomtsalane ephantsi kwamanzi apho unokuhamba khona kwi-aquarium kwitonela yeglasi.